"Embraer EMB-120 Mega Pack FSX & P3D"
Su'aal "Embraer EMB-120 Mega Pack FSX & P3D"
1 sano 6 bilood ka hor - 1 sano 6 bilood ka hor #891 by bobrad79
Hi ... Waxaan faylka kor ku xusan u galay P3Dv4, laakiin qalabku ma shaqeynayo,
Waxaan ku rakibay baabuur iyo sidoo kale isku dayey rakibida gacanta.
Cambaareyn Waardiyeyaashu waxay caawin karaan
DADKA KA DHACAY DADKA HALKAN WAXAAD U BAAHAN TAHAY WAXTAR LEH Dhibaato Badan
Last edit: 1 sanad 6 bilood ka hor by bobrad79.
1 sano 2 bilood ka hor #1065 by davgál1
Galab wanaagsan, forum:
Waxaan jeclaan lahaa in aan wax ka weydiiyo makiinadda diyaaradahan, sababtoo ah mar kasta oo aan bilaabo, mishiinada waxay soo saaraan tamar buuxda oo ku saabsan daqiiqado 10, inkastoo Gobollada Awoodda ay ku jiraan booska Idle, iyo sidoo kale Xayeysiiska (bacadka).
Anigu (dhab ahaantii) ha sameeyo hawsha bilawga ah ee xaqiiqda, laakiin habraaca ka socda PDF ee addon.
Rajo ayaad iga caawin kartaa.
Xubin sare oo ka tirsan
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 17
1 sano 2 bilood ka hor #1066 by DRCW
Marka ugu horeysa demi barnaamijkaaga ammaanka internetka, ka dibna dib u-dajinta barnaamijka. Ogeysii haddii ay taasi shaqaynayso
1 sano 2 bilood ka hor #1084 by davgál1
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada.
Doonaa, laakiin ma shaqeynayo ...
1 sano 2 bilood ka hor - 1 sano 2 bilood ka hor #1085 by DRCW
Haa, waxaan soo saari doonaa wejigaan xayeysiinta ah ee P3D V4 oo arag waxa kor u kaca iyo sida loo xalliyo. Waan kula soo laaban doonaa
Last edit: 1 sanad 2 bilood ka hor by DRCW. Sababta: Bedelida FSX ilaa P3D V4
1 sano 2 bilood ka hor #1086 by DRCW
Inkastoo aan soo dejinayo software-ka, waxan ku xusay maaddooyinka wax akhriska ah, in ay jirto guddi jaale ah oo ku xusan guddiga gawaarida, oo aan kuu ogolaaneynin inaad ka sii gudubto 10% N1. Guddoomiyahan waa inuu noqdaa mid firfircoon inta lagu jiro bilawga iyo in uu ka baxo qulqulka. Adiga oo ka fikiraya inaad tan ogaatid, oo aad raacdo nidaamka, tani waxay noqon kartaa meesha uu khalad ku jiro codka. Ku haaweelo
1 sano 2 bilood ka hor #1087 by DRCW
Hase ahaatee waxaan eegay diyaarad, run ahaantii dhibaatadu waa dhibaatada codeynta ee u dhaxeysa xadhigga 2D iyo qaabka guddoomiyaha. Waxaad ogaan doontaa guddoomiyuhu inuu ku jiro kaliya 2 D gudaheeda, oo aan ku jirin boorsada farsamada. Inta lagu jiro bilawga, kontaroolka shidaalka ayaa u muuqda inuu sidoo kale ka baxayo. Waxaa jira iskahorimaad halkan u dhexeeya xayndaabyada iyo 2D. Ma ciyaarayaan wax fiican. Guddi fejignaanku wuxuu la xiriiraa hawada sare ee P3D. Waxaan samayn doonaa qaar ka mid ah ciyaartoyda ku ciyaaraya oo aan arko waxa aan sameyn karo
1 sano 2 bilood ka hor #1088 by daveh
Mahadsanid, waxaan kaliya ku soo rogay xirmadan qorshahan FSX. Si daacad ah ayaan u maleynayaa in tani ay tahay mid ka mid ah downloadska ugu fiican ee aan weligaa soo dejiyey! Heerarka miisaanku waa mid aan waxba laga qaban, iyo faahfaahinta cambarka (2D panel, guajsiyo iwm) waa mid cajiib ah. Si fiican u qabtay Rikooo!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.283